Akpa loading usoro-News Center-Ningbo SUNSOUL UTgbọala ngwa mma CO., LTD
Akpa loading usoro
Oge: 2020-08-27 Hits: 24
You maara usoro nke ijide ihe niile? Ka anyị lelee taa.
Nke mbu, anyi agha akwukwo. Anyị kwesịrị ịtụ ihe kwesịrị ekwesị akpa dị ka olu na oke ibu nke ibu. E nwere ụdị atọ: 20GP, 40GP, 40HQ.
Mgbe ntinye akwụkwọ, anyị ga-eme ndokwa ka ụgbọala na-adọkpụ na-ebugharị ihe na-enweghị isi site n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ gaa ebe a na-eburu ya. Mgbe ebujuru ngwongwo ahụ n'ime akpa ahụ, a ga-ebufe ngwongwo ahụ zuru n'ọdụ ụgbọ mmiri maka nkwupụta omenala.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka usoro dị mfe, anyị ga-eme ọtụtụ nkwadebe na usoro ọ bụla.
Na usoro nke nkwakọ ngwaahịa ， Nke mbụ, anyị kwesịrị ịgbakọ otu esi ebu igbe dị ka ịdị elu na obosara nke akpa ahụ iji jiri ohere ahụ mee ihe n'ụzọ zuru ezu. Nke abuo, anyị na-agbakọ ngwongwo ahụ dịka data agbakọtara.Egbe etinye ngwongwo ahụ, anyị na-echere ọbịbịa nke akpa ahụ.
Mgbe akpa ahụ rutere, anyị na-amalite ịkwakọ. Enwere ike ihu ya na foto a ebe ọ bụ na akpa ahụ na-adị n'ụgbọala oge niile, yabụ anyị ga-edozi ikpo okwu dị elu, buru ụzọ tinye ngwongwo palletized n'elu ikpo okwu dị elu na forklift, wee jiri ụgbọ ahụ tinye ebe ahụ ngwongwo dị mma na akpa. Mgbe ebufechara ngwongwo niile, mechie ụzọ ma kpọchie ya. N’ikpeazụ, onye ọkwọ ụgbọ ahụ bughachiri igbe ahụ n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Mgbe nkwupụta omenala ahụ gafere, a ga-akwụsị ụgbọ mmiri ahụ ma buru ngwongwo ahụ. N’ikpeazụ, ngwongwo ahụ ga-akwọrọ gị n’akụkụ.
Previous: Oge opupu ihe ubi - achicha
Ọzọ: Ezigbo oge ọkọchị dị na biya na lobster